आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप :नेपालले तेस्रो जित हङकङ चार विकेटले हरायो - Namasteholland, News, Information and Technology
१२ फाल्गुन २०७५, आईतवार १८:४४016
आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप अन्तर्गत एशिया क्षेत्रीय छनोटमा नेपालले तेस्रो जित हात पार्न सफल भएको छ ।
आइतबारको खेलमा नेपालले हङकङलाई चार विकेटले हरायो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित ओभर खेल्दै ८ विकेट गुमाएर ६२ रन बनायो । नेपालका लागि नेरी थापाले सर्वाधिक ६ विकेट लिन सफल भइन् ।
व्यक्तिगत ४ ओभरको स्पेलमा नेरीले ८ रन खर्चिएर ६ विकेट हात पारेकी हुन् । योसँगै टी–२० क्रिकेटमा नेरी एके खेलमा धेरै विकेट लिने खेलाडीको सुचिमा तेस्रो स्थानमा पुगेकी छिन । नेरीले पहिलो विकेट हङकङले २३ रन बनाएका बेला बेला पोनलाई आउट गरिन् । बेलालाई ११ रन बनाएका बेला रुविना क्षेत्रीको हातबाट क्याच आउट गराइन ।
नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएकी नेरीले दोस्रो विकेटको रुपमा नेरीले इ सान टु लाई खाता नै खोल्न नदिई पेभेलियन पठाइन ।
तेस्रो विकेटको रुपमा नेरीले १६ रन बनाइएकी यस्मिन दसवानीलाई आउट गरिन् । हङकङ ३१ रन बनाउँदा ४ विकेट गुमाउन पुगेको थियो । चौथो विकेटको रुपमा नेरीले क्यारी चानको विकेट लिन सफल भइन् । त्यसपछि पाँचौ विकेटको रुपमा कप्तान मारिको हिललाई आउट गरेकी नेरीले छैटौं विकेटका रूपमा जस्मिन टिटमसलाई सिकार गरेकी थिइन् ।
नेरीको ओभर सकिदा ३६ रन बनाएको हङकङले पछि २६ रन थपेको थियो । हङकङका लागि मरिनाले १९ रन बनाइन ।
जवाफमा नेपालले १८ ओभर ३ बलमा ६ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो । नेपालको जितमा अप्सरा बेगमले २४ तथा सरिता मगरले अविजीत १६ रन बनाइन् । त्यसो त नेपालले सुरुवात राम्रो गर्न सकेन । ५ रनमा पहिलो विकेट गुमाएको नेपालले ६ रनमा दोस्रो विकेट खेर फाल्यो ।
२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १०:१५021
७ माघ २०७५, सोमबार ०८:२१025
९ मंसिर २०७५, आईतवार १०:५२015
Hey Buddy!, I found this information for you: "आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप :नेपालले तेस्रो जित हङकङ चार विकेटले हरायो". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%86%e0%a4%87%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a5%a8%e0%a5%a6-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5/. Thank you.